Mayelana NATHI - Dongguan Raofeng Plastic Products Co., Ltd.
I-Dongguan Raofeng Plastic Products Co, Ltd.iyifektri yokucubungula isikhunta epulasitiki ekhiqiza kahle isikhunta sepulatifomu yekhibhodi. Le mboni itholakala eRome Industrial Zone, eQingxi Town, eDongguan City, esifundazweni saseGuangdong. Inethimba lokucubungula labantu abangaphezu kuka-60 nangaphezulu kwama-30 gongs / imishini yama-spark / imishini yokugaya / imishini yokugaya / imishini / imishini yokusika izintambo neminye imishini yokucubungula, ne-90T kuya ku-470T umshini wokujova umjovo waseHaiti nomugqa owodwa womhlangano.
Le nkampani inamandla amakhulu ezobuchwepheshe, ihlanganisa ukuklama kwezinga eliphakeme kanye namathalente e-R & D namakhono abanolwazi nabanekhono kwezobunjiniyela namakhono. Sethule isoftware yokuklama nentuthuko efana ne-UG â… ¡ne-Pro-E evela e-United States ukubona ukwakheka nokuthuthuka kwemikhiqizo. Qalisa ukukhiqizwa kwe-agile nokuguqula ubunjiniyela ukuqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo nokunciphisa umjikelezo wokubumba. Kwakhiwe indlela yesimanje yokwenza isikhunta ngokususelwa ekuhlanganisweni kobuchwepheshe, ukucubungula kokulawulwa kwamanani njengomzimba oyinhloko, nokucubungula okujwayelekile kwemishini njengesengezo.
Le nkampani ine iminyaka engaphezu kweyishumi umjovo udini ukucutshungulwa ubuchwepheshe ithimba, nge eyindida imishini yokukhiqiza, eziphambili imodi ukuphathwa, ezingeni eliphezulu ithimba lobuchwepheshe kanye ephelele pre-yokuthengisa nangemva-sales service, unqobile ukwethenjwa okuphezulu nokuqashelwa okusha nokudala abasebenzisi.
Le nkampani inamathela kwisisekelo "sokuphishekela ikhwalithi enhle kakhulu, ukuhlinzeka ngemikhiqizo ethembekile, ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende, nokungapheli ukuphela"; ukuphishekela inqubomgomo yekhwalithi "yekhwalithi kuyisiqinisekiso senani, ukudala ibhizinisi elinenani eliphakeme", ukuze kuzuzwe "kube nguchwepheshe Umbono wokuthi" amaplastiki acacile ukunikeza izixazululo eziphelele kubahlinzeki "kwenza imizamo engapheli.
Inqubo Isikhunta ngokwezifiso:
Hlaziya inqubo yokubumba umkhiqizo, isakhiwo sesikhunta nenqubo yokukhiqiza. Qinisekisa ukuthi impilo isikhunta ihlangabezana nezidingo zamakhasimende.
Design ephelele isikhunta isakhiwo nokucubungula izingxenye, futhi ubeke phambili izidingo zomhlangano kanye nezidingo inqubo umjovo udini.
Hlaziya ngokugcwele ukukhubazeka kwezingxenye zepulasitiki (njengokuncipha, njll.) Noma izinkinga zesakhiwo sesikhunta (njengokumiswa kobuso bokuhlukaniswa, ukulungiselelwa kwesango, isiqinisekiso sempilo yesikhunta, njll.) Ngaphambi kokuvula isikhunta.
Ukubukeka kwesikhunta: Ukuvela kwesikhunta kufanele kungabi nokugqwala, uhlevane, noma amaphutha emodyuli angaphelele.
Ukuthuthwa kwesikhunta: Ukuthuthwa kwesikhunta kufanele kufakwe amapuleti okuqinisa, ukufakwa kuqinile futhi akunabufakazi bokugqwala.
Imininingwane Isikhunta: Ngesikhathi esifanayo naleso isikhunta lilethwa, iqoqo eliphelele isikhunta egqoke izingxenye kanye nokugcinwa izinto reference zinikezwa.
Business: isikhunta design, isikhunta ukuthuthukiswa, isikhunta yokukhiqiza, umjovo udini, ukuhlangana a services isitayela.